दशैँमा फ्रिजको व्यापार : नाफा कि घाटा | Jukson
दशैँमा फ्रिजको व्यापार : नाफा कि घाटा
गौरव त्रिपाठी / जक्सन डटकम
मिठो मसिनो खाने चाडपर्व हो दशैँ । बडा दशैँमा धेरैले धेरै थरी योजना वनाएका हुन्छन् । चाडपर्वको बेलामा कोही परीवार साथी भाई सगँ घुम्न जाने कोही विभिन्न साहित्यक किताब पढ्ने गछन् भने कोही नवदुर्गामा बजारमा पाइने सामग्रीहरुको छुट कुन दिन देखि सुरु होला र घरका लागी आवश्यक सामाग्री खरीद गरौँला भनेर समय कुर्ने गर्दछन् ।
व्यावसायीहरुले सामाग्रीहरुमा विभीन्न छुट तथा उपहार राखेर आफ्नो व्यापारलाई बढुवा दिने सोच राख्दछन् र छुट दिने गर्छन् । यस्तै मेसो छोप्न स्याङजा अर्जुन चौपारीका रमेश शर्मा पृथ्वीचोकका विभिन्न इलोक्ट्रोनिक्स पसलहरु चार्दै हिडेका थिए ।
पसलै पिच्छे उनी कहाँ धेरै छुट वा सामाग्री खरीद गर्दा उपहार पाइएला भन्दै बुझदै हिडे अन्त्यमा उनीले केही रकमको छुटमा फ्रिज किने । उनी भन्छन्– “ असार देखि घरमा फ्रिज किन्ने सल्लाह भएको थियो अब दशैमा धेरै छुट पाइन्छ त्यही बेला किनौला भनेर दशैको मौका छोपेर ३५ हजारको फ्रिज २९ हजारमा किन्न पाए अब घर लिएर जानको लागी गाडीको व्यवस्था गर्दे छु ।” उनले किनका पसल हो आर जी.सी. इलोक्ट्रोनिक्स पृथ्वी चोकमा । दशैँमा प्रायजसोले फ्रिज खरीद गर्ने सोच बनाएका हुन्छन् ।
शर्मा त उदाहारण पात्र मात्र हुन दशैँमा सहुलियतमा खाद्य वस्तु देखि घरमा आवश्यक पर्ने सामाग्री किनमेलका लागी धेरैले छुट उपहारको आशा राखेका हुन्छन् उपभोत्ताहरुले । गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा रहेका इलोक्ट्रोनिक्स पसलहरुमा दशैँ लागे पनि फ्रिजको व्यापार भने धेरै कम भएको आर जी.सी. इलोक्ट्रोनिक्स पसल पृथ्वी चोकका राजु जिसी बताउछन् । बिगतमा वर्षहरुका दशैमा हामीले दैनिक ८-१० वटा फ्रिज टिभीहरु अन्य सामाग्रीहरु विक्री गर्दा हामीलाई ग्राहकसगँ राम्रो सगँ बोल्ने फुर्सद पनि हुने थिएन तर अहिले त हजुरले पनि देखि हाल्नु भयो नि ग्राहकहरु नै छैनन्” । मैले पसल गरे देखि प्रायःजसो यही काम गर्ने सामान्य कर्मचारी र केहि गाउँ तिरका मानिसहरुले फ्रिज किन्न आउने गरेका छन् विदेश गएर आएकाहरु भने खासै फ्रिज किन्न नआउने गरेको उनको अनुभव छ ।
२६ वर्ष देखी पृथ्वीचोकमा इलोक्ट्रोनिक्स पसल संचालन गर्दै आएका श्री प्रसाद घलेको भने गुनासो अर्कै छ । उनले भने – “अनलाइन सपिङ गर्ने प्रचलन बढेको छ नराम्रा सामाग्रीहरुलाई राम्रो फोटो हालेर घर सम्मै पुराउने भए पछि दुई चार पैसा महङ्गो तिरेर पनि खरिद गर्न थाले ।” अहिले बजारमा इलोक्ट्रोनिक्स पसलहरु धेरै खुले प्रतिस्पर्धा धेरै भएकोले व्यापार घट्न थालेको दुखेसो छ । उनको पसलमा दि स्टार, सामसुङ र सिनसाई कम्पनीका फ्रिजहरु छन् । उनको पसलबाट सामसुङका फ्रिजहरु दिनमा ३÷४ ओटा बिकी्र भइरहेको तर पनि सन्तुष्ठको ब्यापार नभएको बताउछन् ।”
न्युरोडमा रहेको पुमोरी इलोक्ट्रोनिक्स पसलमा दशैको अवसर पारेर २० देखी २२ प्रशित छुट दिदाँ पनि दिनमा २÷३ मात्र फ्रिज बिक्री भइरहेको संचालक रमेश के.सी बताउँछन् । उनको पसलमा गोद्ररेज, सामसुङ, क्यालभनेट, सेन्साई, कोडीका लगाएतका फ्रिजहरु बिक्रीका लागी राखिएको छ । उनको पनि गुनासो छ बिक्री विगतका बर्षहरुको जस्तो छैन ।
पोखराका बजारमा विभीन्न ब्राण्डका फ्रिजहरुको बिक्री हुने गर्छ । पोखरामा प्रायः जसो १९० लिटरका फ्रिजहरु धेरै बिक्री भइरहेको पोखरा इलोक्ट्रोनिक्स व्यवसायी संघका सल्लाहाकार मानोहर श्रेष्ठको भनाई छ । उनका अनुसार अहिले बजारमा सबैभन्दा धेरै एल .जी. कम्पनीको फ्रिज बिक्री भइरहेको छ, त्यस पछि सामसुङ र अन्य कम्पनीका फ्रिजहरु पनि बिक्रीका लागि राखिएका छन् ।
पोखराका करीब एक सय पसलहरुबाट फ्रिज बिक्री हुदा दैनिक १५ लाख बराबरको कारोवार हुने श्रेष्ठको भनाइ छ । दशैमा २ करोड बराबरको फ्रिजको व्यापार हुने श्रेष्ठको दाबी छ । तर, पोखरा इलोक्ट्रोनिक्स व्यवसायी संघका अध्यक्ष उदय बहादुर के.सीको भने फरक मत छ । उनी भन्छन्–“हाम्रो व्यापार चौपट भयो स्थिती नाजुक छ व्यापार नभएर व्यवसायीहरु चिन्तित हुनुहुन्छ ।”
अब बैँक बाट ऋण लिएर व्यवसाय संचालन गर्ने हामीहरुलाई बैँक ब्याजदर अनि सरकारले बढाएको करले गर्दा व्यवसायनै परिवर्तन गर्नु पर्ने जस्तो भएको छ” । उनले भने “ पहिला पहिला वर्षमा एक पटक मासु खाने भनेर दशैमा खसी काट्थे तर अहिले मासु जुनसुकै बेला पनि तपाई खान सक्नुहुन्छ । त्यसैले दशैमा फ्रिज किन्ने मान्यता अहिले नरहेको र आवश्यक पर्दा उपभोत्ताले खरीद गर्न सक्ने भएकोले यो दशैमा हाम्रो व्यापार राम्रो छैन । उपभोत्ताहरु सगँ पैसा नभएर हो की आर्थिक मन्दी लागेर हो हामीले सोचे जस्तो व्यापार गर्न सकेनौ ।
संघका सल्लाहकार श्रेष्ठले व्यवसायी अहिले आत्तिहाल्नु पर्ने स्थिती नभएको बताउछन् । सोह्रश्राद्धमा बिक्री कम हुने नै भयो दशैको बेला सबैले र्आिथक जोहो गरेर किन्न आउने हो, बल्ल त नव दुर्गाको तेस्रो दिन चलदै छ व्यापार राम्रो हुन्छ ढुक्क हुनुहोस् ।”
बजार अनुगमन टोलीले म्याद सकिएका अखाद्य वस्तु र औषधी नष्ट गर्दै
सुनको मूल्य तोलाको ६०० ले बढ्यो